2017 March 06 « QEERROO
Sabboonummaan maali, eenyutu sabboona dha? Eenyu yoo maal godhee fi hojjete sabboonaa jedhama” Gaafii jedhuuf deebiin namootaa ykn akki itti sabboonumaan ifu namootarra namootatti addaa addummaa xixiqqoo qabaachuu mala. Haata’uutii dhugaan nama hundumaa walii galchu jechi “Sabboonummaa” jedhu walittii hidhaa jechoota lamaa ta’uudha. Hikkaan jechoonni kun walitti qaanja’uun kennanis ifa waan ta’eef burjaaja’ins hiikoo gama kanaan muldhatu hin jiru. ykn harki guddeessi namaa ibsa dabalataa malee hiikoo jecha kanaa irratti walii gala.
Maddi jecha kanaa erga kana ta’ee ergaan isaas maal akka ta’e eenyufuu ifaadha. Jechi sabboonaa ykn sabboontuu jedhuu kun kallattiidhaan ergaa “Saba ofiitin boonuu” jedhu dabarsa.Saba ofiitiin boonuun ammoo nama afaan Oromoo dhagahu maraafuu hikni isaa ifaa dha. Continue reading →